Fikradan waxay tuseysaa sida uu u ekaan doono abka Cimilada ee iPadOS | IPhone News
Angel Gonzalez | 27/04/2022 17:00 | macruufka, iPad
iPadOS Waxay u timid sidii nidaamkeeda hawlgalka iPad-ka dhowr sano ka hor. Si kastaba ha ahaatee, ilaa markaas macruufka la waafajiyay baahida iDevices oo dhan iyada oo ujeedadu tahay bixinta deegaanka sii kordheysa dhamaystiran. Laakiin waxaa jiray xaddidaadyo. Sannado badan, isticmaalayaashu waxay sugeen codsiga rasmiga ah ee Cimilada si uu ugu yimaado shaashadda weyn ee iPadka. Si ka soo horjeeda filashooyinka, waligeen ma aanan arag rajo yar oo ah in Apple ay u keeni doonto app-ka iPad-ka. Fikradan cusub waxay muujineysaa sida uu u ekaan doono abka Cimilada ee iPadka iyo waxa sifooyin dheeri ah lagu soo bandhigi karo.
iPadOS 16 ma noqon doonaa cusboonaysiinta ay ku jirto app Cimilada ee iPadka?
Fikradan cusub oo uu daabacay Timo Weigelt in Behance saamiga sida uu u ekaan lahaa abka Cimilada ee iPadka. Jaleecada hore waxay u egtahay nuqul fudud oo u dhexeeya app-ka iOS ee shaashadda wax yar ka weyn. Si kastaba ha ahaatee, kala duwanaanshaha yar yar ee lagu soo bandhigay fikradda oo dhan waxay siinaysaa furayaasha lagu kala saaro labada barnaamij.
Marka hore, blocks-ka macluumaadka waxaa loo habayn karaa sidii inay yihiin widgets iyadoo lagu darayo, tusaale ahaan, 'roobaadka' ama 'jihada dabaysha'. Shaqadan ayaanu ogolaan lahayn dhalin shaashado waqti gaar ah iyadoo lagu saleynayo xogta aan rabno inaan ogaano waqti kasta. sidoo kale waan ogahay waxay soo bandhigaysaa qaab muuqaal cusub maadaama app-ka rasmiga ahi aanu lahayn nakhshad muuqaaleed. Naqshadani waxay u eegi doontaa mid aad u fiican shaashadda iPadka oo leh naqshad labajibbaaran oo meelaha lagala tashanayo ay noqon doonaan midigta iyo macluumaadka cimilada ee bidixda.
IOS 16 ayaa isbedelo waaweyn ku keeni doona Hababka Focus
Dhanka kale, ku dar khariidado cusub oo dhaqaaqa ka duwan kuwa dabaysha iyo roobabka kuwaas oo siin lahaa macluumaad dheeraad ah isticmaalayaasha. Iyo, ugu dambeyntii, calaamad yar ayaa lagu daraa in app-ka lagu abuuri doono Catlyst, kaas oo sidoo kale waxay u ogolaan doontaa keenida app Cimilada macOS cusub.
Wadada buuxda ee maqaalka: Wararka IPhone » macruufka » Fikradani waxay tuseysaa sida uu u ekaan doono abka Cimilada ee iPadOS